Wararka - Soosaarayaasha guddiga Shiinaha ayaa ka mid ah saddexda shirkadood ee ugu sarreeya TV-yada, kuwaas oo wadajir u ah in ka badan 50% saamiga suuqa
Soosaarayaasha guddiga Shiinaha waxaa ka mid ah saddexda shirkadood ee ugu sarreeya TV-yada, kuwaas oo wadajir u ah in ka badan 50% saamiga suuqa
Waxaa saameeyay jadwalka wax soosaarka dheer ee Samsung Display's 8.5-jiilka LCD ee Kuuriyada Koonfureed iyo xawaaraha gaabiska ah ee sameeyayaasha heerka labaad ee TV-yada loogu wareejinayo alaabada IT-da, waxaa lagu qiyaasayaa in shixnadaha guddiga TV-ga ee 2021 ay ku laaban doonaan heerar la mid ah sidii 2020., Gaadhay 269 milyan oo xabbadood. Shirkadaha Shiinaha ee sameeya ayaa ku soo daray seddexda ugu sareysa qiimeynta, taas oo ka dhigan in ka badan 50% suuqa guud ahaan.
Isku-darka guddiga sameeyayaasha, isku-dhafka awoodda wax-soo-saarka, hagaajinta tikniyoolajiyadda, iyo baahida sii kordheysa, 2021, marka lagu daro hirgelinta istiraatiijiyadda wax-soo-saarka ee horumarinta baaxadda weyn, kuwa sameeya magacyadu waxay sii wadi doonaan inay kordhiyaan qiimaha guddiga isla markaana ay yareeyaan faa'iidada. Cadaadiska hoostiisa, waxay sidoo kale bilowday inay si firfircoon ula qabsato qaabeynta cabirka alaabta. Sidaa darteed, waxaa la filayaa in celceliska cabbirka TV-yada sanadkan ay fursad u leeyihiin inay ku koraan 1.6 inji, una gudbaan 50 inji.
Falanqeeyaha TrendForce Chen Qiaohui ayaa sii sheegay in cabirka weyn uu runtii gacan ka geysan doono dheef shiidka awooda wax soo saar. Awoodda wax-soo-saar ee xaddidan qeybta hore ee 2021 kaliya ma horseedi doonto yaraanta sahayda, laakiin sidoo kale waxay taageeri doontaa isbeddellada sii socda ee kor u kaca ee qiimaha guddiga TV-ga; iyo TV qeybtii labaad ee sanadka. Haddii dalabaadka loo baahan yahay in la sii daayo iyo in kale, waa inaan dhawrnaa dhowr qodob oo muhiim ah: Marka hore, in kororka sicirka suuqa uu saameyn ku yeelan doono wax iibsiga; tan labaad, haddii xaaladda faafida si wax ku ool ah loo xakameeyay ka dib markii tallaalka lagu qaatay dalal kala duwan; tan saddexaad, in soo kabashada dhaqaalaha adduunku ay caddahay iyo in kale, iwm; Su'aasha ugu dambeysa waxay tahay macaamiisha dalabkeeda amarrada xad-dhaafka ah inay soo shaac baxeen sababo la xiriira kororka qiimaha alaabta ceeriin ee kor u socota, shilalka warshadaha sida dabka iyo shilalka kale ee warshadaha, muraayadda oo yaraata, keenista IC-ga oo aad u dheer, iyo waqtiga dheer ee gaadiidka .
Labada shirkadood ee waaweyn ee sameeya shirarka Shiinaha, BOE iyo China Star Optoelectronics, ayaa sii waday inay kordhiyaan awooddooda wax soo saar isla markaana ku biirid iyo wax soo iibsiba ay dhammaadeen. Wadajir, labaduba waxay xisaabtami doonaan sida ugu badan ee 40% ee guud ahaan shixnadaha TV-ga. Isla mar ahaantaana, BOE iyo Huaxing Optoelectronics waxay si firfircoon kor ugu qaadayaan awooddooda farsamo ee u gaarka ah waxayna kor u qaadayaan wareejinta alaabada heerka sare ah, sida 8K, ZBD, AM MiniLED, iwm. Mustaqbalka, waxaa la filayaa inay sii wado fidinta shirkadda. dhul ballaadhan oo ka sii durugsan oo lagu gaadho is-dhexgal toosan oo nidaamsan iyada oo lagu salaynayo horumarka tikniyoolajiyadda iyo lacag badan.
Intaas waxaa sii dheer, Huike, oo awooddiisa wax soo saar ay sii kordheyso, wuxuu si dabiici ah u noqday diiradda suuqa marka bixinta ay dhaafto baahida. Si wada jir ah oo ay weheliyaan warshad Changsha H5 oo qarka u saaran inay gasho wax soo saar ballaaran, Huike wuxuu leeyahay afar xariiq oo wax soo saar 8-jiil ah. Sannadkan, oo leh kororka awoodda wax soo saar, waxay noqotay diiradda noocyada ugu horreeya. Istaraatijiyado iskaashi oo dheeri ah, waxaa la rajeynayaa in Huike uu geli doono saddexda ugu sarreysa liiska shixnadaha guddiga TV-ga markii ugu horreysay, oo ay la socdaan qiyaastii 41.91 milyan oo gogo ', koror sanadle ah oo ah 33.7%.
Shixnadaha ka socda Taiwan ee AUO iyo Innolux waxyar baa dib loo eegay sababtoo ah awooda wax soosaarka oo xadidan, laakiin labadooduba waxaa ka go'an kor u qaadista wax soo saarka iyo istiraatiijiyado iskaashi oo dhinacyada kala duwan ah, kuwaas oo u keenaya iyaga faa'iidooyin badan. Iyaga ka mid ah, AUO ma aha oo kaliya inay hogaamiso warshadaha horumarinta waxsoosaarka heer sare leh ee 8K + ZBD, laakiin sidoo kale waxay horseed u tahay soo saarayaasha guddiga kale ee horumarinta Micro LED. Marka lagu daro kala duwanaanta wax soo saarka, Innolux waxay leedahay ODM u gaar ah oo ka mid ah faa'iidooyinkeeda. Waxaa xusid mudan in labada shirkadood ee soosaarayaasha ah ee reer Taiwan ay ku tiirsan yihiin faa'iidooyinka kooxda iyo xiriirka wada shaqeynta muddada dheer ee ay la leeyihiin soo saarayaasha nashqadeynta IC. Xaaladda hadda jirta ee cidhiidhiga IC-ga, way ka faa'iido badan tahay soosaarayaasha kale ee guddiga.
Inkasta oo LGD iyo Kuuriyada Koonfureed ee Kuuriyada Koofureed ay kordhiyeen jadwalka wax soo saarka ee khadka wax soo saarka ee LCD ee Kuuriya si loo daboolo baahida suuqa ee hadda jirta, haddana wali waxay si firfircoon ugu beddelanayaan alaabooyin cusub. Kuwaas waxaa ka mid ah, LG Display wuxuu ballaarin doonaa awoodda wax-soo-saar ee warshaddeeda Guangzhou OLED rubuca labaad ee sanadkan si loo sii ballaariyo suuqa OLED. In kasta oo Samsung Display ay ka dhici doonto qiimeynta sababo la xiriira hoos u dhigidda awoodda wax soo saar ee 2021, haddana alaabooyinka cusub ee QD-OLED ayaa la filayaa inay si rasmi ah suuqa u soo galaan rubuca afaraad ee sannadkan, iyadoo la filayo in 2022 la geeyo xamuul dhan 2 milyan.